Kufananidza: yakanakisa kugoverwa kweLinux kwe2016 | Linux Vakapindwa muropa
Rimwezve gore kubva kuLxA tinoita nyowani Linux yekuparadzira ongororo yeiyi 2016. Saka iwe unogona kusarudza kuti ndeipi inonyanya kukodzera yedistros yakaonekwa gore rino. Sezvaunenge uchitoziva, iko kuchinjika kweGNU / Linux kwakanyanyisa, zvichipa mukana wekusarudza pakati pemazana ekusiyana kwakasiyana. Izvi zvinogona kuve mukana, asi kune vamwe rinova dambudziko nekuti pane huwandu hwakawanda zvekuti zvinonetsa kusarudza yakanakisa pane ese mamiriro.
Ndokusaka tichikuisa iwe chinyorwa ichi umo isu tinokubatsira iwe kusarudza yakanakisa pane ese kesi. Iwo mavhenekera aripo anoreva kuti pane chimwe chinhu kune zvese zvavanofarira uye zvavanoda, mafilosofi mazhinji ekuvandudza anokodzera zvakakwana huwandu hukuru hwezvakasiyana zvinodiwa uye zvinofarirwa nevashandisi kuitira kuti pasave neanogadzikana nebasa ravo kana nharaunda yekuvaraidza.
Zvakanaka, Parizvino muna 2016 zvinokwana kuongorora kugoverwa yatinofanira kutarisa kuti ndeipi inonakidza. Kuti usashandure izvi kuve runyorwa rwakareruka, ndinoda kugadzira mamwe mapoka uye ndotora "anokunda" weboka rega rega, zvichiita kuti sarudzo ive nyore kuvaverengi vedu. Nekudaro, vazhinji venyu hamubvumirane nesarudzo, inyaya yekuravira uye ndinogara ndichizvitaura. Wese munhu anogona kusarudza iyo distro yavanofarira zvakanyanya kana iyo yavanonzwa kugadzikana nayo.
Izvo hazvisi zvekutaura kuti mumwe ari nani pane mumweIngori nyaya yenyaradzo uye ruzivo. Kana iwe uri nyanzvi yeDebian, semuenzaniso, unogona kufarira kusarudza iyi pamusoro peimwe yezvikamu zvatichadoma, nekuti ruzivo ibhonasi. Ini ndinotaura izvi vamwe vashandisi vasati vagumbuka kuti yavo yavanofarira distro haisi pane iyo runyorwa kana kuti isina kusarudzwa mune chakatarwa chikamu. Ini ndinokumbira ruregerero, asi iwe unofanirwa kusarudza anokunda uye hazvireve kuti iwe wakavhiringidzika, ndinodzokorora, inyaya yekuravira.
Zvakanaka, izvo zvikamu zvatakasarudza kubva kuLxA uye "kukunda" Linux 2016 kugoverwa kuri:
1 Zvimwe zvinogadziriswa: Arch Linux
2 Yakanaka: yekutangaOS / Deepin OS
3 Yakawanda inyowani: SolusOS uye PapyrOS
4 Kuwedzera gore-rinoshamwaridzika: ChromiumOS / Chrome OS
5 Zvakanakisa zveWindows: Zorin OS
6 Zvakanakisa kune avo vanobva kuMac OS X: PearOS
7 Zvakanakisa kune vatsva: Ubuntu / openSUSE
8 Zvakanakisa zveMaharaBSD: Gentoo
9 Zvakanakisa zve "imbwa dzekare": Slackware
10 Zvakanakisa pamalaptop: Ubuntu MATE
11 Zvakanakisa kune yekare hardware: Lubuntu
12 Zvakanakisa kune IoT: Snappy Ubuntu Core
13 Zvakanakisa kune Desktops: Linux Mint (Cinnamon)
14 Zvakanakisisa kune vatambi: SteamOS
15 Zvakanakisa kune zvakavanzika: Miswe
16 Yakanakisa kugadzirwa kwemultimedia: Ubuntu Studio
17 Zvakanakisisa kune bhizinesi: SLES uye RHEL
18 Zvakanakisisa pamaseva: Debian / CentOS
19 Zvakanakisa zve mobile: Plasma Mobile
20 Zvakanakisa zveArm zvishandiso: Arch Linux ARM
21 Zvakanakisa kune Vanoda Rusununguko: Tirsquel / Fedora
Zvimwe zvinogadziriswa: Arch Linux
Kana iwe uchida kugoverwa kugoverwa, iyo iwe yaunokwanisa kugadzirisa kune yako kufarira, ndiko kuti Arch Linux. Kunyangwe isiri yakaringana kugoverwa kwevatangi, nekuti haisi iyo yakapusa nekure. Kuisirwa kwayo uye zvimwe zvinhu zvinogona kuve zvakaomarara kune vasina ruzivo, asi masimba ayo anoyemurwa nevashandisi vane ruzivo.
Dhawunirodha Arch Linux
Yakanaka: yekutangaOS / Deepin OS
Kana iwe uchida nharaunda yakanaka uye iwe uine hanya nezve chinoonekwa chimiro, iwe unofanirwa kuyedza chepakutangaOSIcho chigadziko cheUbuntu kune zvimwe zvinhu zvakadzoswazve, senge iyo Pantheon desktop nharaunda. Iyo inoratidzira nharaunda yakavakirwa paGTK + iyo inoonekwa nekukuyeuchidza nezve Apple's Mac OS X, zvese mukugadzirwa nekushanda. Semuenzaniso, Plack iDock yakafanana neApple OS X.
Linux Deepin kana Deepin OS kumwe kugovera uko kwave kuchangobva kuve kwakakurumbira kwazvo nekuda kwechitarisiko chayo chekuona. Iyo yakavakirwa paDebian uye inouya kubva kuChina, uko vagadziri vayo vakaita basa rakakura kugadzira yavo yega desktop desktop inonzi Deepin Desktop Nharaunda yakavakirwa paGNOME. Pasina kupokana ndeimwe yeakareruka, akanaka kwazvo uye anoshanda.
Yakawanda inyowani: SolusOS uye PapyrOS
Kana iwe uchida zvemazuva ano, SolusOS iyo distro nyowani ine inonakidza mitsva. Kugadzirwa kweDebian-kwakavakirwa GNU / Linux iyo yakawanda basa rakaiswa mukugadzira iyo Solus chirongwa, ine minimalist desktop nharaunda inonzi Budgie uye eopkg package maneja.
Kune rumwe rutivi, papyrOS Ini ndinofunga chirongwa chinonakidza kwazvo futi uye chinotevera maitiro akafanana naSolus, ichipa distro ine yakazvimirira uye inovandudza desktop nharaunda. Mune ino kesi, yayo GUI inogadzirwa ichishandisa Chinyorwa Dhizaini, yakafanana neyakaitwa neGoogle muApple Lollipop yeiyo interface, ichipa kubata kushoma uye kureruka.
Kuwedzera gore-rinoshamwaridzika: ChromiumOS / Chrome OS
Kana iwe uchida nharaunda ine hushamwari ine gore rakasanganiswa-zvakanaka, ndiko kuti ChromeOS, asi zvirokwazvo, tinowana chigadzirwa chakafanana neicho cheApple. Google, kuburikidza nevagadziri vayo, inopa hardware + software, nekudaro kuva neChannelOS pasina kutenga iyo Hardware ibasa rakaoma. Asi ndizvo zviri zveChromiumOS, iyo yakavhurika misiyano yeC ChromeOS yaunogona kuyedza pakombuta yako. Yakagadzirwa zvichibva paGoogle Chrome chirongwa uye chakagadzirwa uye uye chegore, mune nharaunda ine maapplication anowanikwa kubva nyore-kuisa App Store yakafanana neiyo Android.
Nenzira, kune vanodya vanofarira, Chrome OS, kunyangwe ini ndazvisanganisira mune ino positi, haisi GNU / Linux distro, senge Android isiri ...
Zvakanakisa zveWindows: Zorin OS
Kana iwe uri Windows mudiwa kana iwe uchibva ku Microsft inoshanda sisitimu, pamwe iwe unofanirwa kuziva nezve kuvapo kwe Zorin OS, Linux distro ine nzvimbo ine hushamwari iyo inokuyeuchidza nezve OS yekambani yeRedmond. Mahwindo, mamenu uye zvimwe zvinoonekwa zvinoonekwa zvakachengetwa zvakakwana kuti zviite senge ...
Zvakanakisa kune avo vanobva kuMac OS X: PearOS
Pear OS, inozivikanwawo seGMac Linux kana SnowBlack Linux, ndiyo distro yako kana iwe uchida chimwe chinhu chakafanana neMac OS X. Kana iwe uri mushandisi weApple masystem, PearOS inokupa iwe nzvimbo yebasa yakafanana neiyo yeapuro uye mauri unzwe wakasununguka, hongu, uine Linux pasi pehood. Kana iwe uchida, iwe unogona zvakare kutsvaga mamwe akafanana mamwe mapurojekiti kune ino, ayo aripo uye isu takatotaura nezvavo muLxA.
Zvakanakisa kune vatsva: Ubuntu / openSUSE
Ubuntu Iyo distro huru kune wese munhu (kunyangwe nyanzvi kwazvo), asi pamusoro pezvose ndeyeCanonical's "Linux yevanhu". Iyi kambani yaita nhamburiko huru yekugadzira yakakwana, inoshanda distro, kusanganisa yazvino nhau uye matekinoroji. Asi zvese izvi pasina kurasikirwa nekureruka uye yakasarudzika musimboti neiyo Kubatana (kwakavakirwa paGNOME Shell). Nharaunda yayo hombe haizokusiye wega mukutarisana nenjodzi uye nenheyo isingagone kuve nani, Debian ...
Kumwe kushandiswa kuri nyore kushandisa nekuda kweYaST ndiko vhura. Iyo yakasimba, inoshanda uye ine simba, ine zvese zvaunoda, imwe yemakuru iri padhuze neUbuntu uye nekudaro inokodzera nzvimbo muchinyorwa chino. Shure kwayo kune makambani SUSE uye AMD sembiru huru dzebudiriro, saka iwe unofanirwa kuzvitora seyakakomba chirongwa chekuvimba.
Zvakanakisa zveMaharaBSD: Gentoo
Kana iwe uchibva kuFreeBSD, semuenzaniso, saka pamwe unosuwa ako anoremekedzwa madoko, saka, yakanyanya kugoverwa kwauri ndeye Gentoo, pamwe nePortage package maneja iyo yakafanana neaya madoko atiri kutaura nezvawo. Iyo distro yakanaka chaizvo, asi zvinosuwisa haina kukodzera kune vanotanga nekuda kwekuoma kwayo.
Zvakanakisa zve "imbwa dzekare": Slackware
Slackware ndechimwe chezvakanyanya kugovaniswa. Vanga vachiperekedza iyo Linux kernel ndoda kubvira payakatangwa. Yaive imwe yekutanga kusikwa uye ichiri kuramba ichichinja kusvika nhasi. Izvo hazvisi nyore, saka ndinoti mumusoro wenyaya kuti yakakodzera "imbwa dzekare", vanhu vakatogadzirwa munyika yeLinux, saGentoo kana Arch Linux, izvi zviri zvitatu zvezvakaomesesa.
Zvakanakisa pamalaptop: Ubuntu MATE
Ubuntu ine zvakawanda zvinonaka sezvamunoziva, imwe yeaya mavhenekeri iri Ubuntu MATE. Aya mavhenekera haangori chero chinhu kunze kweiyo Ubuntu base kune akasiyana madesktop enzvimbo akabatanidzwa, mune ino MATE. Naizvozvo iwe une yakanakisa yeUbuntu, asi nenzvimbo dzakasiyana uye dzakachengetedzwa zviri pamutemo. MATE yakagadzirwa kubva kuGNOME 2 kodhi, nekuda kwekusawirirana neGNOME 3 shanduko, isiri inorema asi yakakwana kuti ishandiswe pamakomputa anotakurika.
Dhawunorodha Ubuntu MATE
Zvakanakisa kune yekare hardware: Lubuntu
Lubuntu ndeimwe yemavhenekeri eUbuntu neiyo LXDE desktop nharaunda (Lightweight X11 Desktop Nharaunda). Iyo inoremerwa nharaunda iyo inogona kutsigirwa pane yakaderera-zviwanikwa makomputa kana yekare hardware. Saka kana iwe uchida kumutsidzira komputa yekare kana uine timu isingataure-kutaura, isa Lubuntu uye ichadzoka kuhupenyu.
Zvakanakisa kune IoT: Snappy Ubuntu Core
Pano panouya mukuru Snappy Ubuntu Core, kuti uibatanidze pamwe nemamwe magajeti senge mabhodhi eSBC, nezvimwewo, kuita kuti mapurojekiti ako akabatana azadzike. Kubva pakauya IoT kana iyo Internet yezvinhu muSpanish, huwandu hwemapurojekiti hwave kuita mufashoni. IPv6, chinotsiva IPv4, inounza zvakanyanya kuomarara uye zvakanyanya kuwanda IP kero. IPv4 yanga ichipera uye ikozvino nekuwanikwa kweasingaperi IP kero, ese marudzi emidziyo yakabatana anogona kugadzirwa, kubva kuTV, midziyo yemumba, inopfeka, mota dzakabatana, smart matoyi, drones, marobhoti, nezvimwe. Ndosaka ma greats akaita seCanonical neMicrosoft aona tsinga iyo inoreva, iyo yekupedzisira yakagadzira iyo Windows 10 IoT Core projekiti asi, hazvisi nekuti iyi webhusaiti paLinux, chirongwa ichi chakaringana uye chakazara. kushungurudzika ...
Dhawunirodha Snappy Ubuntu Core
Zvakanakisa kune Desktops: Linux Mint (Cinnamon)
Sezvo isu tichikurudzira Ubuntu MATE yemalaptop, ndinofunga imwe yeakanakisa distros yedesktop iri Linux Mint neCinnamon nharaunda. Linux Mint ndeimwe yeakakura distros, inonakidza uye iwe uchave unofara kwazvo kune iyo chiitiko chainopa. Nenzira, kune avo vasingazive zvakawanda Cinnamon (sinamoni), iri forogo kana forogo yeGNOME Shell iyo yakatanga kugadzirirwa Linux Mint, kunyangwe yave kuwanikwa kune mamwe ma distros. Chengetedza imwe tsika yechinyakare seGNOME 2, ine Muffin semaneja wehwindo (forogo yeGNOME 3 Mutter).
Dhawunirodha Linux Mint
Zvakanakisisa kune vatambi: SteamOS
Valve yakagara yakazvipira zvakanyanya kuLinux nyika. Akatoburitsa mazita makuru emitambo yake yevhidhiyo yepenguin chikuva uye akagadzira mapurojekiti akadai se Steam OS uye Steam Machine, yekutanga kuve kugoverwa kweUbuntu Linux yakagadzirirwa mitambo yemavhidhiyo uye multimedia ine zvivakwa zvevatyairi vemakadhi emifananidzo, nerutsigiro rweSteam Controller uye neiyo Steam nharaunda yakaiswa-pamberi nekutadza kupa yakanakisa chiitiko. Nenzira iyi iwe unokwanisa kuwana zvinopfuura mazana mazana maviri nemazita anowanikwa pane iyo Steam chitoro kuti usamire kutamba.
Zvakanakisa kune zvakavanzika: Miswe
Miswe ndeye LiveCD (kana USB Live) yatakataura nezvayo kakawanda. Sezvo isingade kuisirwa, haina kusiya trace, asi pamusoro pekuve nezvose zvinodiwa kuti ishandiswe mumararamiro ehupenyu, kugovera kunotsamira pamapurojekiti akaita seTor yekusazivikanwa kana uchitsvaga mambure. Vanoti ndiyo distro iyo Edward Snowden anoshandisa ...
Yakanakisa kugadzirwa kwemultimedia: Ubuntu Studio
Ubuntu Studio Iko kugoverwa kweUbuntu uko kwakateedzana mapakeji ekugadzirwa kwemultimedia (odhiyo, vhidhiyo uye gadziriso yemifananidzo) yakawedzerwa iyo ichauya inobatsira kana ukazvipira iwe kune izvi. Munguva yakapfuura yaishandisa iyo GNOME nharaunda, asi seyeshanduro 11.1o yakatanga kushandisa Xfce, inorema nharaunda kupa simba kugadzirisa, pasina kutambisa zviwanikwa pane yayo GUI. Pakati pemapakeji iwe aunogona kuwana ndeayo eodhiyo: Ardor, Audacity, Hydrogen, JACK Audio Kubatanidza Kit, JAMin, LyLyPond, Mixx, MusE, Rosegarder, TiMidity ++, Wired. Zvevhidhiyo pane: CinePaint, PiTiVi, Kino, Stopmotion, VLC, nezvimwe. Panguva yemifananidzo yatiinayo: Agave, Blender, Enbled, FontForge, GIMP, Inkscape, Scribus, Synfig, nezvimwe.
Dhawunirodha Ubuntu Studio
Zvakanakisisa kune bhizinesi: SLES uye RHEL
SuSE Linux Enterprise Server 11.3
Red Hat uye SUSE vane chikamu ichi chakanyatsoziva neSUSE Linux Enterprise Server uye Red Hat Enterprise Linux. Ini zvechokwadi handigone kukuudza kuti ndechipi chiri nani, ndosaka ndichivasanganisira vese. Ose ane hukuru husingakundike, asi misiyano pakati pavo. Naizvozvo, zvinoenderana nezvaunoda chinhu chimwe kana chimwe icho, unogona kusarudza pakati pezviviri, kunyange zvese zviri zviviri zvichikudziridza kugona kwako kubata maseva nemakomputa mahombe, maficha ehunyanzvi ayo anodiwa kwazvo uyezve pasina kukanganwa gore.
download SLES y RHEL
Zvakanakisisa pamaseva: Debian / CentOS
Zvekare pane maviri makuru eeseva: Debian uye CentOS. Kana kuti ndingadai ndisingazive kusarudza imwe yevaviri. Ivo vaviri vakwikwidzi vakasimba vasingakwanise kutorwa kubva kumusoro, maviri anomiririra zviso zviviri zvepasirese zveLinux mapakeji: DEB neRPM. Debian yakakurisa, yakagadzikana, yakachengeteka, yakasimba uye ine simba macro projekiti inogona kuve mubatsiri mukuru wekuisa pane yako server, ine hombe nzvimbo yekusimudzira uye kutendeukira kune panomuka matambudziko. Kune rimwe divi CentOS (Nharaunda Enterprise OS) forogo yakavakirwa paRed Hat kodhi uye inotsigirwa nekambani iyi, saka unogona kutarisira yemahara "Red Hat" yekusimudzira sevha yako uye neakanyanya maficha ...
download Debian y CentOS
Zvakanakisa zve mobile: Plasma Mobile
Plasma Mobile Icho chirongwa chitsva kwazvo chinogona kupedzisira chave kukundikana sevamwe kana kusawana kutarisirwa kwakakodzera, sezvakaitika kuUbuntu Mobile, TizenOS, Sailfish kana FirefoxOS. Asi zvinogona zvakare kuve budiriro huru mune ramangwana uye zvinobudirira. KDE yakagadzira zvekare imwe huru chirongwa, iri Kubuntu-based inoshanda sisitimu yemidziyo nhare. Iyo inoshandisa yakakosha madhiraivha eApple uye iyo Kwin / Wayland hwindo rekugadzira maneja.
Chinhu chakanaka ndechekuti iwe unogona kushandisa ese ari maviri native mapurogiramu eApple senge veko vanogona kuwanikwa kuUbuntu, vachigadzira imwe sisitimu yepasirese. Sezvinotarisirwa, KDE yakabatanidza rutsigiro rwePlasma widgets uye panguva ino inogona kuiswa paNexus 5 kubva kuGoogle neLG, kunyangwe zvishoma nezvishoma ichave yakagadzirira mamwe madhivhisi ...
Dhawunirodha Plasma Nhare
Zvakanakisa zveArm zvishandiso: Arch Linux ARM
ARM rave chivakwa chinofanirwa kutariswa nekuda kwekuita kwayo / kudyiwa. Iyo yakanakira nyika yanhasi yekupa yakanaka simba kunyatsoshanda, iine yakasiya dzimwe dzimba dzakadai seMIPI mune zvishandiso senge ma routers, modem, madhimoni, nezvimwewo, asi zvakave zvichizivikanwawo kuita niche mumatafura uye mafoni, sekuwanda SBC mabhodhi uye kunyange madiki malaptop… Naizvozvo, kuve neakanaka mashandiro ekudzora aya madhiragi kwakakosha, uye ndizvo ArchLinux ARM.
Dhawunirodha Arch Linux ARM
Zvakanakisa kune Vanoda Rusununguko: Tirsquel / Fedora
Icho chirongwa cheSpanish, chirongwa cheGalician. Trisquel Iko kuzivikanwa kwakanyatso kuzivikanwa uye kwakanyatso kutariswa neiyo FSF sezvo isingashandisi software yekudyara uye yakachenesa iyo distro yemakodhi, madhiraivha uye mabhureki akavharwa mukernel, iri 100% yemahara. Unogona kuiwana mune matatu edhisheni: Trisquel, Trisquel Edu naTrisquel Pro.
Fedora iriwo yemahara, saka inomiririra imwe yakanaka imwe chirongwa cheSpanish. Iyo yakavakirwa paiyo RPM package system uye inotsigirwa neRed Hat. Izvo zvakafanana nezvinoitika neakavhurikaSUSE uye SUSE. Iyo projekiti inomuka nechinangwa chekusanganisira yemahara uye yakavhurwa sosi software, ichive chechina chinonyanya kufambiswa kugovera mushure meMageia, Linux Mint uye Ubuntu.
Usakanganwa kusiya zvaunotaura uine mazano kana kusahadzika. Ndinoomerera zvakare, kune akawanda, unogona kuzviwana wakasununguka nevamwe, asi uku ndiko kusarudzwa kwedu. Kana iwe uine imwe pfungwa, siya iyo mune yekutaura, ichave inogamuchirwa kwazvo.
Kana wanga uchingoda kuziva iyo Kugoverwa kweLinux 2017, tinya pane iyi link yatichangobva kukusiya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Linux Kugovera 2016
Zvakanaka, iro runyorwa rwema distros, ndingadai ndakaisa Manjaro kumwe kunhu.
Mupiro wakanaka kwazvo !!!
Pindura kuna Lucas
Uye Mageia ??
Pindura kuna Ndira
Zvinotaridza kwandiri kuti dunhu rakanakisa remaseva ndiFedora, ndanga ndichiishandisa kwenguva yakareba uye ndichifananidzwa neDebian kana CentOS, Fedora iri nyore uye yakasimba panguva imwe chete, kuwedzera kune inoenderana nharaunda dzakasiyana.
RHEL's test centre… yakanakira maseva?
chimwe chinhu hachiwedzere.
Pindura kuna Paul
Iyo yakanakisa distro haina kutanga kune kuravira kwangu, ini ndinoda Deepin 15.2, yakanaka chero kwaunotarisa kwairi.
Iyo yakanakisa KDE
Ndoitawo. (Kunyangwe ini ndichishandisa Elementary, ini ndinoona kuti Deepin anotaridzika zvakanyanya kunakidza)
Pindura kuna adrianuxphp
Ndine urombo, ndatozvitaura muchinyorwa. Kune akawanda akawandisa madistros uye akawandisa maonero akasiyana. Havasi vese vanogona kuverengerwa, ini ndakasiiwa nezvimwe zvakakosha zvakaita seMageia, KaOS, nezvimwe.
Kwaziso nekutenda nekutevera.
PS: ndosaka zvakanaka kuti iwe unosiya makomenti
Jaime de Olavarrieta akadaro
Enda currada iwe warova!
Mumwe chete mubvunzo. Ini ndinofunga kuti sezvo mufananidzo weDebian neCinnamon uripo, kugovera uku ndinofunga tinogona kuzviona kunge zvakakodzera desktop. Mushure meLubuntu zvirinani kune yekare hardware… Ok, kana iwe usina ruzivo. Asi ini ndinofunga kuti kana isu tichinyatsoda kumutsa dhara Hardware, ini ndinobheja paDebian futi, pasina kukosha kweLXDE. XFCE uye kunyange MATE yakashanda zvakanyanya zvirinani kwandiri paDebian kupfuura Lubuntu's LXDE.
Makorokoto pamashure ekukwazisa.
Pindura Jaime de Olavarrieta
Maita basa nekubudirira kwazvo WEB Makorokoto.
Ini ndaizowedzera yakanaka KNOPPIX
Kwaziso kubva kuBotota DE Colombia
Ini ndinoda Linux Mint neCinnamon, Mate, uye XFCE.
Kwaziso zvakare kubva kuBogotá DC
Ini ndinoda Linux Mint ine CInnamon, MATE, uye XFCE.
Zvakare kukwazisa kubva kuBogotá
Alex Puchades akadaro
Uye zvakadiniko naFedora? Hapana che 100% yemahara distro ine yakanakisa yeGNOME chiitiko?
Pindura kunalex Puchades
Zvakanaka, ino ndiyo nzvimbo iyo isu tese patinoshevedzera kumatenga nekuti chimwe chinhu chakakosha kwatiri chakabviswa. Saka izvi ndizvo zvandichaita:
Uye Deepin? naManjaro?
Kwete kufunga Fedora zvinoita kunge murombo kwandiri. Kune akawanda ma distros anobva kuUbuntu
Victor Adrian akadaro
Sekuwedzera windowscera kugovera ini ndaizoisa Deepin yakagadzirirwa nedoko mune inoshanda mode. Ndiri kuishandisa nevadzidzi vangu pamabhuku emambure mudunhu (Argentina) nekuti inoshandisa mashoma zviwanikwa. ane yazvino, isingaremi tafura; nemhedzisiro, uye vakomana vanoifarira kupfuura Huayra uye kunyangwe kupfuura iye Win
Semazuva ese, chinokonzeresa chikuru ndidzo hombe (vamwe vadzidzisi vasingade kudzidza chimwe chinhu chitsva nekuti havana chishuwo kana nguva. Nguva ivo vanopambadza zvakanyanya vachishanda nekombuta izere nemavhairasi, inononoka adware, spyware, mashiripiti anomhanyisa anowedzera, nezvimwe zvakaiswa "ndega")
Pindura Victor Adrián
wandinonyanya kufarira kutamba ndiOSOS chandinoda kugona kuve nacho ne ubuntu tb
Juan Miguel akadaro
Ndiri naAlex naJonathan, chii chine fedora? Mushure mekuyedza akasiyana distros, mamwe acho aunotaura, ndanga ndinayo kweanenge makore mashanu pane iyo laptop mune yayo desktop vhezheni uye iri yakasarudzika, 5% yakavimbiswa kugadzikana, uye tisingataure mapakeji anowanikwa e dnf ...
Pindura Juan Miguel
Ndakanganwa, kukanganisa kwangu. Yakatowedzerwa. Ziva kuti kune akawandisa uye akawanda maonero akasiyana… Hazvina kunaya kune wese munhu kufarira.
Hakusi mangwanani zvishoma here? Unoziva sei kuti irinani harizobuda pakati pezvino naZvita? ;-)
Eya, anga ari mwedzi mishoma kuti uone akawanda emapurojekiti egore rino. Nekudaro, kana matsva akakosha akagoverwa akaonekwa, isu tichaawedzera. Ndiri kureva, hachisi chinhu chakamira, asi chine simba chinokura kana paine nhau.
Carlos Garcia akadaro
Sekutaura kwakaita chinyorwa muchirevo chayo, zviri pachena kuti hakuzove nemasaiti ese ayo munhu angade, nekuti imwechete kana maviri chete anogona kunge ari akanakisa uye eawo akanakisa ane hukama nekuravira kwese nekushandisa, vazhinji vakasiyiwa, kana zvakakwana Asi senzvimbo yekutanga kune mumwe munhu anoda maonero ekufunga, iwo fananidzo wakanaka.
Pindura Carlos Garcia
Ivan Barra Martinez muchengeti wemufananidzo akadaro
Vakanditi imbwa yakare ...
Pindura kuna Ivan Barra Martinez
Zvinotaridza kuti muchinyorwa chino pane Ubuntu chete
Pindura kune bichomen
Ndine urombo, hatigone kuisa ese mukati uye ichokwadi kuti kune akawanda akavakirwa paDebian neUbuntu, asi… iyo haisiyo mhaka yangu.
Kwaziso nekutenda nekuverenga.
Ndinoda kutaura zvinhu zvishoma.
Yekutanga: ndapota, iyo "inogadziriswa" inokuvadza maziso. Mumutauro wedu mune izwi rinoti "customizable" zvinova ndizvo chaizvo zvamuri kutsvaga.
Chepiri; Ini ndatova ndaneta nekunzwa kuti Ubuntu ndiyo yakanakira newbies. Chero ani akamboshandisa OpenSUSE anogona kuzviwana zviri nyore kwazvo kushandisa. Nezvikonzero zvakawanda, asi kupfuura zvese, YaST.
Chekutanga pane zvese, sezvo RAE isingaremekedze, ini handiremekedze RAE zvakanyanya futi. Kutaura kuti ndinobva kusainzi haisi chikonzero chekukanda pandinoita zvikanganiso. Pese pandinenge ndakanganisa ndanga ndakumbira ruregerero uye ndinogadzirisa. Uye ndizvozvo chaizvo, kuti izwi rekuti munhu ariko uye ndiri wekutanga kudzivirira mutauro wedu pavanotaura zvinhu senge "Ndiri kunwa kofi" kana "nechiso" Uye usatore izvo zveRAE sekurwiswa pachako, iko kurwisa kwakananga kwavari nekuti vanobvuma mamwe mazwi sekubvumirwa kupasa, kuti vanoisa patafura gakava rehusimbe, hazvo, asi chisingaregererwi ndechekuti vanobvuma tsananguro senge iya yavanotamba se «hacker» uyo anoita kunge abuda mukireshi uye anokuendesa kunetsekana kana avo varipo vanhu vakangwara kana kuti iyo smartphone yavanobata muruoko rwavo yakangwara kupfuura ivo (iyo hapana chimwe kunze kwechigadzirwa chemagetsi chakaitwa kuti chiite zvinhu zvinoverengeka).
Kana iri chechipiri, handikwanise kuwedzera zvese ...
Kutenda nekuverenga kwedu. Shuwiro yakanakisa.
Ndiri wechiGiriki FanDBZ akadaro
Ini ndinofunga kuti vatsva vanofanirwa kusanganisira Linux Mint (Chero desktop desktop) nekuti ini ndinonzwa kuti yakazara uye yakareruka kupfuura Ubuntu.
Pindura SoyGriego FanDBZ
Sezvandataura muchinyorwa, ndinokumbira ruregerero. Kune akawanda uye akanaka kwazvo uye kwete ese anogona kunge ari mumapoka akasiyana uye handina kuda kudzokorora ... Ehe Linux Mint iri nyore uye inonakidza kune chero mushandisi.
Kutenda nekuverenga, kwaziso!
Masikati akanaka. Ndokumbirawo, ungave une moyo munyoro wekunditungamira mune izvi, ndine laptop dell i5 processor, 6gb ram, 350gb hard disk, Intel hd 3000 mifananidzo, yaunofunga kuti ndiyo yakanyanya kunaka yandinogona kuisa? clear based on linux, kusahadzika kwangu ndekwekuti ivo vanoti iyo ubuntu 10.xx, 11.xx shanduro dzinokuvadza malaptop mabhatiri
email yangu iri emconejo@gmail.com . kubva kuCosta Rica maita basa
Zviripachena kuti ini handisi kuzonetsekana nezve RAE, heh, asi hongu, sekutaura kwedu muExtremadura, kushandiswa kusasarudzika kwema anglicisms akachinjwa kunondipa hushingi hwakawanda ... Mubasa rangu, pese pandinonzwa izvo " mergear "kana" forking "madhimoni anondibvisa. :-D
Nechinhu che "hacker", ndinonzwisisa kuti iwe unoisa iyo dudziro. RAE hapana chimwe chainoita kunze kwekutora izvo zvinotaurwa mumugwagwa uye, chero zvichirwadza, iwe unotaura nemukomana ari mumugwagwa nezve mubi uye chinhu chekutanga chaanofunga nezvacho ndechekuti.
Kune mutsva muGNU / Linux Linux Mint, mune chero chinwiwa, ane (asi chaizvo) ane hushamwari kupfuura Ubuntu uye ndinotaura izvozvo kubva pane zvangu ruzivo. Uye zvinzvimbo zvekutora, zvakagadzirwa neashoma Antergos, ChaletOS, Manjaro kana Pippermint, imwe neimwe muchikamu chayo chinoenderana ...
Ini ndinoti Slackware inosanganisirwa, makore ayo anofanirwa kuremekedzwa, uye cherekedza kuti nekutaura kuti "ndeimwe yezvigadzirwa zvekare", hazvireve kuti mapakeji akasanganisirwa ari. Panguva ino chaipo pane chisingaperi chiitiko kubva kuchikwata cheSlackware, uye zvingangoita mazuva ese kugadziridzwa kwebazi razvino tichitarisa kuburitswa kuri kuita vhezheni 14.2
Makulu-Linux yakakodzera kuitarisa yakatosanganisirwa uye kuyedzwa uye yakanakira vatsva kuWindows.
miguel ngirozi gomez noah akadaro
Iwe unenge uchisuwa chikamu che distro yevana. Ivo vanogona zvakare kushandisa linux. Ini ndaizoisa ubuntu neshuga. Kwaziso
Pindura kuna miguel ngirozi gómez noé
Rodrigo Perez akadaro
Batsirai ndapota, ndine muchina unotsigira wakanyanya Win XP, uye iine 70% wifi yekuwana (200kbs) mune INFINITUM MOBILE kuwana iyo inosvika kumba kwangu unogona kuona zvakanaka Iwe chubhu pa360p; Ndakaita bvunzo neLinux mint kubatana kwakaderedzwa kusvika 62% uye hakutakure chero peji ne USB wifi Ine Realtek 8187l chip uye 24db Tplink grid antenna, ndiyo here iyo yekutyaira? kuita nekadhi iri?
Pindura Rodrigo Perez
Maka Pasiel akadaro
Kashoma kuti hapana kana izwi rinotaurwa pamusoro paManjaro. Mune iyo distrowatch iyo yakamisikidzwa seyechitatu inonyanya kufarirwa, asi kunyangwe ini ndichinzwisisa kuti haisi kuenzanisa kwekusarudzwa kwekugovera, inofanirwa kuongororwa kuti nei yakaiswa mukati meinonyanya kufarira. Anongova maonero ekuremekedza, hapana chimwezve. Ndatenda nechinyorwa, icho chakanaka kwazvo. Kwaziso.
Pindura kuna Mark Pasiel
Zvinonaka semavara, zviri pachena. wangu mudiki mupiro kuchinhu uye kune avo vanofarira ndechekuti ini ndakaisa Ubuntu Mate mune ingangove prehistoric Acer Aspire 1650 uye yakasununguka zvakanyanya kupfuura neLXLE inova iyo yandaive nayo kusvika shanduko iyi.
Pindura kuna Saulotrux
Ndakagadzirisa dambudziko rangu rekupunzika kwepc nekutenda manjaro iyo yaindibvumidza kuti ndizive dambudziko rangu neiyo 4.4 kernel, nokudaro ndichiichinjira imwe uye yagadziriswa dambudziko !! Kwaziso.
Daniel Paton akadaro
Zvekuda: Ini ndakatanga paLinux muna1993.Ndakatanga neEsware. Ndakapfuura neMandrake, Mandriva, RedHat, Fedora, Suse, uye pakupedzisira Debian. Ndakaishandisa kubva paPatato vhezheni. Ini ndashandisa FreeBSD uye ndakaedza DragonFlyBSD, OpenBSD, uye NetBSD. Ini ndinoda BSDs asi dzimwe nguva ndine nyaya dzekuenderana. Kumba kune malaptops matatu uye komputa yedesktop uye ini ndinobata lab remacomputer ine gumi nemashanu makomputa Ini ndichangobva "kuwana" Slackware uye handisi kuchinja kune dzimwe shanduro dzeLinux. Iyo yakasimba sedombo. Kusafanira kugadzirisa kutsamira ndinoona mukana wakakura kupokana neyakajairika. Izvo zvinokupa rusununguko uye zvinodzivirira matambudziko asingaperi uye hazvisi izvo zvakaoma, uye hazvitore nguva yakareba kudaro. Iwe unongofanirwa kutarisa paSlackBuilds webhusaiti izvo package inoenderana uye wotanga kuisa kubva pasi kusvika kumusoro. Iyo sbopkg chishandiso chinobatanidza chinonakidza. Ndiyo Linux inonyanya kufanana neBSD UNIX uye ndinoida iyo. Bhutsu yeLXDE desktop mune 15MB chete neDebian's 200MB. Ini ndakakwanisa kumhanyisa OpenBSD (yangu yandinodisisa) mu600MB chete neiyoyo software. Ini ndinofunga Slackware ine simba kwazvo nekuti inorerutsa zvinhu zvakawanda zvinonyatsoshandisa ndangariro uye cpu. Kwandiri dunhu rakanakisa revose uye nekure. Iyo nguva yanga ichichinja inonyatso kuoneka mukuomarara kwayo. Debian iri kutanga isiriyo nzira mumaonero angu uye ndiko kuyedza kufanana neWindows zviri nyore nekuzvipira zvimwe zvinhu. Pasina mubvunzo kufuridzirwa neUbuntu ... Kuravira iwo mavara !!!
Pindura kuna Daniel Patón
Beto Kuziva akadaro
Peppermint Os neLinux Lite hazvipo, zviri chaizvo zvemaNewbies (iwo andinoshandisa) ... akareruka, akatsiga, ari nyore uye anogadzirisika zvakanyanya.Uyezve imwe yakanaka ndeye Q4OS yakavakirwa paDebian, kune zvakawanda asi ini handisi 'yeuka kwaziso dzese.
Pindura Beto A Saber
Mupiro wakanaka, makorokoto
Kugona!! Ini ndakafara kwazvo nehunhu hwangu mwedzi mishoma yapfuura, kudzamara nhevedzano yetsaona papc yangu yakandiita kuti nditange kumanikidzwa distro-hopping kufunga kuti imwe distro yaizogadzirisa dambudziko kwandiri, uye saka zvaive. Mushure mekuisa linux Mint uye ndichiona kuti dambudziko rakaramba riripo, ndakaedza Manjaro uye nekutenda kune chishandiso chayo chekuchinja kernel zvakanaka, ndakaona kuti iyo 4.4 kernel yakakonzera pc yangu kupunzika nekuda kwekusaenderana neprosesa yangu. Saka ini ndaizowedzera kune iyo blog: Yakanyanya kugovera kuyedza kernel: Manjaro !!!!!! Kwaziwai !!
Ndinogara neOpenSuse KDE ... yakatsiga, izere uye inonzwisisika. Iko kunenge kusingabate iyo console inova iyo inotyisa kune vatsva veWin
Kugona!!! Ini ndinokurudzira zvikuru manjaro sezvo nekutenda kwaari ndaiziva chinokonzeresa kukonzeresa pakombuta yangu yedesktop yaive iyo 4.4 kernel uye neyakareruka iyo manjaro inofanirwa kuchinja kernel ini ndakagadzirisa dambudziko rangu. Kwaziso
Sekureva kweumwe muverengi ... kugovera kwakanyanya kwevana kunenge kushaikwa. Ubuntu neshuga? Ndichaiona…
Mhoroi, mubvunzo ... kana ndichida kuwana nekuisa iyo yekutanga elementOS inoshanda sisitimu iwe yaunotaura uye ini ndakazviona mumavhidhiyo akati wandei paYouTube kuti vazhinji vanayo (inofanira kunge yakanaka kwazvo) ndinofanira kuribhadhara here? pane yayo webhusaiti inotaura kuti ini ndinofanira kupa kuti ndikwanise kurodhaunta ... ndizvo here? Ndatenda
Zvakanaka kwete, tinya pane "tsika" woisa 0. Panguva iyoyo kurodha pasi kuchavhura.
Kwete Miguel, hazvidi kubhadhara chero chinhu. Chete kana iwe uchida kushanda pamwe nekugovera.
Dzvanya paCustom uye isa € 0 uye kurodha pasi kunovhura zvakadaro.
Unogona kunditungamira mune zvinotevera, dhawunirodha iyo gmc linux 10 × 64 distro kubva kune yepamutemo webhusaiti asi ini ndinoedza kuipisa kune dvd uye ndakaiyedza nezvirongwa zvakasiyana asi haina bhuti, inopa matambudziko, ini ndakaedzawo gadzira live usb ine pendrive uye hapana anogona kunditungamira nezvazvo kana kuziva chirongwa kana maitiro anoshanda.
Yekupedzisira openuse yakaitika kwandiri zvakafanana asi pakupedzisira ndakakwanisa kuiisa zvinobudirira, asi kubva pa0 ine fomati kana yakachena dhisiki dhisiki. Ndatenda
Rudzii m…. izvi? PapyrOS chirongwa chakafa (chave chisingashande kwemakore), PearOS yakasiiwa mu2014 ... oh mwari wangu!
Manheru akanaka, ndiani angandibatsire kumisikidza mimwe michina naLubunto muChapinero, Bogota, maita basa
Edwin salgado akadaro
Inogona kusanganisira Zorin, ine yakanakisa interface, yayo graphical nharaunda inotaridzika yakafanana neyakagadziridzwa akaitwa kune iyo android pane nhare.
Pindura Edwin Salgado
Gustavo Romagna Egido akadaro
Manheru akanaka, chinyorwa chakanakisa, ndinokutendai zvikuru.
Pindura Gustavo Romagna Egido
Chinonyanya kufadza ndechekuti munyori anofanirwa kukumbira ruregerero pachine nguva muchinyorwa uyezve anofanira kuramba achidaro mumakomenti uye nekutitendazve… Basa rakakura nekutenda nekuedza kwako.
Pfungwa dzatinadzo tese pamusoro pekuti ndeipi yakanyanya kunaka asi mashoma mazwi ekuvaka anoonekwa.
Pindura kuna Parkeryan
Ivai nemangwanani akanaka kwazvo, ndiri kukunyorerai kubva kuArgentina Republic, kuti ndikubvunzei, ndine laptop ine 2 Gb yegondohwe memory, Intel® Pentium (R) CPU B940 @ 2.00GHz × 2 uye Epson LX 125 printer, iyo distro yandinogona kuisa kuti ndiwane zvakanakisa kubva pamidziyo uye pamusoro pezvose zvine mutsindo wakanaka, ini ndinojekesa kuti ndine Ubuntu Mate yakaiswa Ndatenda kwazvo pamberi uye endai neblog, inonakidza kwazvo. Gustavo Romagna Egido.
Miguel Ngirozi akadaro
Ndinoda kutamira kuLinux. Ini ndiri mushandisi weWindows uye zvinoita kwandiri kuti ndiri kuenda kunosarudza iyo Zorin distro, asi mubvunzo wangu unotevera: Ndinogona here kuchinja dunhu uye kuchengeta mafaera angu?
Pindura Miguel Angel
Ini ndinoshanda mubazi rekushambadzira uye tave tichishandisa yekutanga OS kwemakore akati wandei, parizvino Freya 64bits uye tiri kufara kwazvo, chinhu choga chandiri kusuwa ndiAdove, iyo yatakapa neGimp. Asi hapana akawanda akadzidziswa epamberi. Kugoverwa kwepuraimari hakusi iko kwakanyanya kunaka asi kunotikodzera sepfuti.
Mumwe munhu anoziva inonzi arch linux Wallpaper inonzi, kana ndiani anogona kuipfuudza kwandiri.
Chinja pakati pemadhairekitori nenzira yekushandisa pasina kushandisa cd